Windowed मोडमा खेल कसरी बनाउने। सम्भव तरिका
धेरै कम्प्युटर खेलाडीहरूलाई झ्यालमा खेल सञ्चालन गर्न रुचाउँदैनन्। का कसरी windowed मोडमा खेल बिना अतिरिक्त "shamanism" बनाउन बाहिर आंकडा प्रयास गरौं।
जब तपाईं काम मा अनलाइन खेल खेल्न, यो पक्कै पनि आफ्नो कर्तव्य एउटा लगनशील मनोवृत्ति भनिन्छ गर्न सकिँदैन। तर, हामी सबै मान्छे हो र कहिले काँही एक व्यक्ति बस आराम गर्न आवश्यक छ कि राम्ररी थाह छन्।
लगभग सबै अनलाइन खेल windowed मोडमा चालु छन्। यो सुविधा विकासकर्ता तिनीहरूलाई मा बनाएको छ र आफ्नो व्यक्तिगत कम्प्युटरमा कुनै पनि अतिरिक्त भार बोक्न छैन।
windowed मोड चलान गर्न, तपाईं बस ग्राफिक्स सेटिङमा खन्नुहोस् छ। प्रायजसो, झ्यालमा खेलको समावेश संवाददाता वस्तु मा एक चेकमार्क सेट द्वारा बुझे छ। तिनीहरूले यो जस्तो हुन सक्छ:
कहिलेकाहीं पावर बटन अन्य मोड एक स्विच रूपमा कार्यान्वयन गरिएको छ।
सबै विकासकर्ताहरूले कसरी खेल निर्मित सेटिङहरू संग windowed मोडमा बनाउन को तरिका प्रदान गर्नुहोस्। तसर्थ, हामी सञ्चालन प्रणाली को ज्ञान को समर्थन छ। झ्यालमा आवेदन चलान गर्न, हामी खेल एउटा सर्टकट फेला पार्न आवश्यक छ। तपाईं त निम्न प्रक्रिया प्रदर्शन गर्न आवश्यक हुनेछ:
हामी सर्टकट को गुण जानुहोस्। यो गर्न, पहिले मा दायाँ माउस बटन थिच्नुहोस् र उपयुक्त वस्तु चयन गर्नुहोस्।
जसमा बाटो कार्यान्वयन फाइल एउटा लाइन, को लागि हामी हेर्दै छौं।
-W वा -window: त्यहाँ स्ट्रिङ को अन्त मा, निम्न थप्छ।
यो windowed मोडमा खेलको सुरुवात गर्न अनुमति दिन्छ। तथापि, सबै अनुप्रयोगहरू यस प्रविधिको समर्थन सिर्जना गरिएको छ, त्यसैले खेल सुस्त हुन सक्छ, त्यहाँ hovering हुन सक्छ सम्झना।
त्यहाँ windowed मोडमा खेल कसरी बनाउने अर्को सम्भावना छ। यो बरु पुरानो खेल आउँदा यो विशेष गरी कुशल छ। र 2010 मा परियोजनाहरूको मुद्दा बुझाउँछ, तर धेरै पहिले। windowed मोडमा लुकाउन, तपाईं बस एक निश्चित कुञ्जी संयोजन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं कम्प्युटर मा रुचि गर्दै खेलौना सुरु गर्न स्वतन्त्र महसुस। तर, असुरक्षित डाटा गुमाउनुपर्ने जोगिन गर्न, यो राम्रो सत्र सुरु भएको छ। कुनै पनि कम्प्युटरमा खेल देखा खोल्ने मेनुमा, कुञ्जी संयोजन Alt + प्रविष्ट गर्नुहोस् थिच्नुहोस्। विचार यो windowed मोडमा जानु पर्छ भन्ने छ।
को बाट सहयोग
यदि माथि विधिहरू मदत थिएन, सधैं त्यहाँ अनुभवी खेलाडीहरूलाई वा व्यवसायीक लागि आशा छ। यस्तो प्रक्रिया झ्यालमा चलाउन छ प्रत्येक खेलको लागि अद्वितीय हुनेछ, त्यसैले सामान्य सल्लाह यहाँ दिइनेछ।
windowed मोडमा खेल कसरी बनाउने? यो गर्न, राम्ररी परियोजना को आधिकारिक वेबसाइट जाँच्न प्रयास गर्नुहोस्। तथ्यलाई कहिलेकाहीं यो सेटिङ फाइल विशिष्ट खेल हस्तलिखित हस्तक्षेप सुरु गर्न आवश्यक हुन सक्छ भन्ने छ। तपाईं जो फाइल आफ्नो खेल मा ग्राफिक्स सेटिङहरू लागि जिम्मेवार छ जान्नु आवश्यक र यो परिवर्तन गर्न छ भनेर। सम्झना, तर, यो सधैं काम गर्न सक्छन् भनेर यो संभावना, परियोजना को निर्माताहरू मा राखे पर्छ भनेर।
अर्को विकल्प - तेस्रो-पक्ष सफ्टवेयर विकास। खेल भनेर आफ्नो Windows चल्न एप्लेटहरू सिर्जना गर्न सक्षम, Hack गर्न सक्छन् कारीगरों, तर यी अवस्थामा धेरै दुर्लभ छन्।
त्यहाँ अर्को सानो चाल छ, तर तपाईं आवश्यक मात्र बस जस्तो झ्यालमा खेल सुरु गर्न यो विधि उपयुक्त छ। र यो चलिरहेको छैन एकदम विन्डो छ।
यो हामीले भर्चुअल बक्स आवश्यक छ। यो मंच भर्चुअल मंच सिर्जना गर्न डिजाइन गरिएको छ। यो कस्तो अर्थ राख्छ? तपाईं आफ्नो हार्ड ड्राइभमा ठाउँ आवंटित र अर्को अपरेटिङ सिस्टम स्थापना गर्नुहोस्। फलस्वरूप, तपाईं "कम्प्युटर मा कम्प्युटर।" प्राप्त यो भर्चुअल अपरेटिङ सिस्टम मा आफ्नो खेल स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ। आफैमा, चाल छैन प्रणाली धेरै स्रोतहरू रूपमा दुई पटक हुनेछ कि, अरूलाई भन्दा झन् खराब बाहेक छ। तर, परिणाम स्पष्ट छ - तपाईं बन्द छिटो "लुकाउनुहोस्" मा क्लिक गरेर खेल गर्न सक्नुहुन्छ अवास्तविक मेशिन।
एक प्रविधी समर्थन "स्टीम" कसरी लेख्न? हामी सत्य खोज्न
"Maynkraft" जस्तै charovalnyu के: निर्देशन
इस्पात 18 व्हील: Haulin - अमेरिका जित्न
क्यास संग खेल कसरी स्थापना गर्ने? स्मृति कार्ड वा ट्याब्लेटमा क्यास संग खेल स्थापना
कसरी ट्यांक को विश्व खेल्न: रहस्य र सल्लाह
पूल "ठिक" (Krasnogorsk): सिंहावलोकन, वर्णन र ठेगाना
बिल Bryson: जीवनी र काम
केही सरल नियमहरू मात्र आवश्यक प्रयोग गर्न द्वारा बैंक ग्राहक अनुगमन गर्न
"गोथिक 2. गाढा सागा": सबै खोजहरू को पूरा
'Ambrogeksal' हो। प्रयोगको लागि निर्देशन
जमीनमा दूरी मीटर। दूरी नाप्ने लागि विधिहरू
योजना चिनाई भट्टीमा वा घर बगैचा लागि ओवन। Hob र ओवन आफ्नै हात संग ईटा ओवन
स्लोवाकिया मा स्की रिसोर्ट्स: मूल्य, वर्णन र फोटो
दबाइ "Analgin": संरचना, निर्देशन
यो रोचक प्रश्न छ: कुन दिन क्रिसमस?